DHAGEYSO Soomaaliland oo sheegtay inay sugayso amaanka dadka Oromada. – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO Soomaaliland oo sheegtay inay sugayso amaanka dadka Oromada.
Wasiirka Arrimaha Dibada maamulka Soomaaliland Sacad Cali Shire oo Shir la qaatay Ciidamada amniga ee maamulkiisa ayaa sheegay inaan marnaba dhibaato loo geysan doonin dadka Oromada ah ee soo gaaray deegaanada Soomaaliland.
Waxa uu sheegay Wasiirku in Ciidamada amniga uu kala hadlay inay ilaaliyaan amaanka dadka ka soo jeeda qoomiyada Oromada ee ku sugan Soomaaliland kuwaasi ka soo carayay rabshadihii ka dhacay deegaano ka mid ah dowlad deegaanka Soomaalida dalka Ethopia.
Sidoo kale waxa uu sheegay inay go’aan ku gaareen ilaalin nabada dadka Oromada ah ee jooga deegaanada Soomaaliland maadaama ay yihiin dad aan wax dhibaato ah cidna u gaysan oo shacab ah.
Wasiirka Arrimaha Dibada maamulka Soomaaliland Sacad Cali Shire ayaa fariin u diray shacabka Soomaaliland,wuxuuna kula dardaarmay in looga baahan yahay dhowrid amaanka iyo xaquuqda dadka Oromada iyo maalkood gaar ahaan kuwa ku sugan Soomaalilan.
Hadalka wasiirka arimah dibada Soomaaliland ayaa imaanaya ayadoo Deegaanada uu ka arimiyo maamulka Soomaaliland ay soo gaaray dad badan oo Oromo ah kuwaasi oo ka soo carayay rabshadihii ka dhacay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya.
← DHAGEYSO Maxakamada ciidamada Qalabka side ee Soomaaliya oo xkun ku riday sadex nin.
DHAGEYSO :Gudoomiyaha Dhuusamareeb Macalin Nuur Cilmi oo ka hadlay hawl galkii bacaha madoow ee baabuurta lagu dhejiyo. →